Uyenza njani into yokulinganisa isiphumo kunye neFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilinganisa njani isiphumo sesantya kunye neFotohop
UPablo Gondar | | Izixhobo zoYilo, Photoshop, Tutorials
Como linganisa isiphumo sesantya nge Photoshop kwiifoto zakho yinto enokusetyenziswa kuyilo oluthile okanye kwiifoto, sinako linganisa ukuba into emileyo ihamba ngokukhawuleza. Yindlela enomdla yokufumana ukusebenza kweeprojekthi ezithile, kunokuba ngakumbi ngexabiso eliphantsi kwaye kulula Ngamaxesha athile, umzekelo, ifoto yemoto ehambayo kulula ukuyithatha ngokwezibalo.
Esi siphumo sinokusetyenziselwa ezinye iintlobo zeenjongo, yi isiphithiphithi sokuhamba ezinokuthi zisetyenziswe kule meko linganisa isantya. Amathuba e Photoshop Azinamda xa kufikwa ekwenzeni i-retouching yeefoto kunye ne-montage, ke kuyathakazelisa ukuba nazo ezi ntlobo zezixhobo.
Photoshop inoluhlu olupheleleyo lokucoca ulwelo enokusetyenziselwa ukulinganisa iziphumo ezithile, umzekelo sinokusebenzisa intshukumo yokunyakaza ukulinganisa ukuba into emileyo inentshukumo. Kwimizuzu nje embalwa siza kuba nakho ukwenza oku kugqibela kunomdla kwiifoto zethu.
Into yokuqala esiyifunayo yi ifoto yento enentshukumo, kule meko siza kusebenzisa imoto. Nje ukuba ifoto ivulwe, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuba phinda kabini umaleko ophambili, Olunye lomaleko luya kuba nokukhanya kunye nolunye aluyi kuba.
Nje ukuba sibe namacwecwe enziwe siya kusebenza kwifayile isiphumo sokufiphaza, ngenxa yoku siya kwibar ephezulu ye Photoshop kwaye sijonga ukhetho lwe Icebo lokucoca ulwelo / ukufiphala / intshukumo yokukhanya. Esi siphumo kufuneka sisetyenziswe kumaleko omnye kuphela, sigcina olunye uluhlu ngaphandle kwempembelelo.
Emva kokufaka ukufiphala into elandelayo ekufuneka siyenzile tshintsha iodolo yomalekoukubeka umaleko ongenampembelelo ngaphezulu komaleko owenzayo. Nje ukuba sibe neendawo ezibekiweyo, into elandelayo esiza kuyenza yile yenza imaski yomaleko, le maski kufuneka ikuluhlu oluphezulu (elingenampembelelo).
Ngoncedo lwesigqumathelo semaleko esiyifumanayo susa iindawo zomaleko ophezulu apho isihluzo sesindululo esingafumanekiyo, isiphumo siyafezekiswa kuba umaleko wemoto awunantshukumo ngelixa umaleko osezantsi usenza. Esi sihluzo sinokusetyenziselwa inani elingenasiphelo leeprojekthi ezibonisa ukulinganisa zonke iintlobo zeziphumo, kule meko yimifanekiso nje yemoto kodwa inokuba luncedo kwimizobo yentengiso yemoto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Uyilinganisa njani isiphumo sesantya kunye neFotohop
Izizathu ezi-3 zokuba kutheni umfanekiso ufanele ixabiso lamawaka kuyilo
Izixhobo ezi-5 zokucoca iifowuni zokukhusela ngokukhawuleza